विश्वकपको नयाँ विजेता को बन्ला त ? - Himalayan Kangaroo
विश्वकपको नयाँ विजेता को बन्ला त ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ असार २०७१, आईतवार ०८:५९ |
ब्राजिललाई सेमिफाइनलमा ७ गोल गरेर विश्वकपको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो नतिजा हात पार्ने जर्मनीले आज पनि अर्जेन्टिनालाई स्तव्ध पार्न सक्ने अनुमान लगाउनेहरू पनि धैरै छन्। सन् २००६ मा टाइब्रेकरमा र सन् २०१० मा अर्जेन्टिनालाई क्वार्टर फाइनलमा ४–० ले हराएको गतिलो इतिहास जर्मनीसँग छ। ब्राजिललाई सेमिफाइनलमा ७ गोल गरेर विश्वकपको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो नतिजा हात पार्ने जर्मनीले यसो गर्न सक्ने अनुमान लगाउनेहरू पनि धैरै छन्। सन् २००६ मा टाइब्रेकरमा र सन् २०१० मा अर्जेन्टिनालाई क्वार्टर फाइनलमा ४–० ले हराएको गतिलो इतिहास जर्मनीसँग छ।
तर लियोनेल मेसीको नेतृत्वमा रहेको अर्जेन्टिना फाइनलसम्म पुग्दा संगठित हुन थालेको देखिन्छ। उनीहरू यो विश्वकपमा धेरै परीक्षाबाट गुज्रिएका छैनन्। अझ खेलको मुख्यभार कप्तान मेसीको जादुगरी खेलमा टिकेको देखिएको छ। टोलीले फाइनलसम्म पुग्ने क्रममा जर्मनीले गरेको १७ गोलभन्दा आधा कम ८ गोल मात्र गरेको छ।
अर्जेन्टिनाले गोल भने कम मात्र खाएको छ। फेरि मेसी हुनुको कथा अर्जेन्टिनाका लागि आफैमा ठूलो बल बनेको छ। विश्लेषकहरु भन्छन- फाइनलजस्तो खेलको तनावमा भिन्न प्रतिभा भएका खेलाडीहरू चम्किने गर्छन्। मेसी जस्ता खेलाडी हुनुको फाइदा यस्तो बेला अर्जेन्टिनालाई हुन सक्छ । यता ३६ वर्षीय भेट्रान मिरास्लोभ क्लोजको अनुभवले पनि खेलमा फरक नतिजा निस्कन सक्ने खेल विश्लेषकहरू बताउँछन्। विश्वकपमा १६ गोल गरिसकेका उनमा त्यो क्षमता देखिएको छ। यदि जर्मनीले इतिहास दोहोर्याए दक्षिण अमेरिकी भूमिमा विश्वकप उचाल्ने पहिलो युरोपेली टोली पनि हुनेछ। अर्जेन्टिना भने दक्षिण अमेरिकी शान जोगाउँदै उपाधि जित्ने धुनमा देखिन्छ।
Previousआजको राशिफल :वि.सं.२०७१ साल असार २९ गते आइतबार
Nextनेताले गरेको फोहोर विद्यार्थीले सफा गरे
प्रतिष्ठित न्याभ कप क्रिकेट टुर्नामेन्टको ११ औं संस्करण शुरु,को को विजेता भए ?
१२ माघ २०७२, मंगलवार ०३:३०
एएफसी सोलिडारिटी कप फुटबललागि नेपाली राष्ट्रिय टोली घोषणा
९ कार्तिक २०७३, मंगलवार १५:३५